Awoodeysan: Sare u qaad Mawduucyada Saddexaad ee Lagu kalsoon yahay | Martech Zone
Awoodeeyay: Kor u Qaadista Mawduucyada Saddexaad ee Lagu kalsoon yahay
Talaado, Maarso 4, 2014 Talaado, Febraayo 25, 2014 Douglas Karr
Maaddaama suuqleyda waxyaabaha ku qoran ay ku qoraan waxyaabaha ay ka kooban yihiin boggooda, had iyo jeer waxaa jira arrin ku saabsan kalsooni. Dabcan waxaad kor u qaadi doontaa magacaaga, alaabadaada iyo adeegyada sida ugu fiican. Haddii kale, markii bogagga saddexaad ee kalsoonida lagu qoro ku saabsan adiga summad, wax soo saar iyo adeeg - nuxurkaas si dabiici ah ayaa loogu kalsoon yahay maadaama qoraagu uusan dano dhaqaale ka lahayn shirkadda (rajo ahaan). Qoraagu wuxuu qorayaa nuxurka sidii dib u eegis daacad ah oo sumcaddooda ayuu khadka ku dhejinayaa.
Sannado badan ka hor, saaxiibkeyga wanaagsan ayaa ii sheegay khiyaano ku saabsan dadaalkooda suuq-geynta ah ee lacagta la siiyo. Ma aysan horumarin iyaga u gaar ah nuxurka, waxay kor u qaadeen maqaallo waaweyn iyo dib u eegisyo laga sameeyay baraha kale ee iyaga ku saabsan maxaa yeelay si wanaagsan ayey u beddeleen. Tani waa isla habkaas Awoodey shaqeeya.
Awoodey waxay u saamaxdaa suuqleyda shirkadaha iyo shirkadaha inay ka helaan waxyaabaha la aaminay ee la ogaado markii wax looga qorayo bogagga dhinac saddexaad. Waxay bixiyaan dashboard bilaash ah si loo raadiyo loona helo waxa ku jira, kor loogu qaado iyada oo loo marayo wadiiqadooda, ama lacag lagu bixiyo si kor loogu qaado iyada oo loo marayo kanaalada suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Toddobaadkii hore waxaan kala hadlay agaasimaha guud, Peyman Nilforoush, isbeddelka oo aad ayey ugu faraxsan yihiin.
Aad u badan suuq-geynta iibiyeyaashu waxay weydiistaan ​​shirkadaha inay bilaabaan bixinta hore, ka hor intaanay shirkaddu ogayn saamaynta uu adeeggu ku yeelan doono cabbirada ganacsiga. Marka aan nahay'Powerered ', waxaan soo bandhigeynaa qaab aasaasi ah oo kala duwan oo qof walba uu uga faa'iideysan karo helitaankayaga lacag la'aanta ah iyo barxadda kumbuyuutarrada oo aan aragno natiijooyinka dhabta ah, ka dibna waxay u cusbooneysiin karaan adeegyada kordhinta lacag bixinta, haddii ay doortaan, saameyn weyn. Helitaanka macluumaad tayo leh, oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan mowduucyada ay macaamiishaadu xiiseynayaan ma ahan inay noqdaan wax ay tahay inaad iska bixiso - taasi waa wax qof kastaa xaq u leeyahay. Maanta, waxaan ka dhigeynaa mid la wada heli karo.
Hadda waxaa jira laba qaybood oo ka mid ah barxadda awoodda
Kordhinta Bilaashka ah - InPowered's daahfurka macluumaadka iyo balaadhinta waxay awood u siineysaa suuqleyda, xirfadleyda PR iyo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada inay raadsadaan calaamadaha, alaabada ama mowduucyada ka dibna ay ogaadaan lana wadaagaan waxyaabaha ugu kalsoonida badan taageerayaashooda iyo kuwa raacsan Facebook, Twitter iyo LinkedIn.
Kordhinta Lacagta - InPowered wuxuu tilmaamayaa qodobbada ugu xiisaha badan ee laga qoray astaan, ka dibna u oggolaanaysa suuqleyda inay lacag ku bixiyaan si kor loogu qaado waxyaabahaas lagu kalsoon yahay oo ah xayeysiis hooyo iyada oo loo marayo qaybinta bartilmaameedka ah ee InPowered Tani waxay awood u siineysaa sumadaha inay waxbartaan oo qaabeeyaan aragtida macmiilka oo ay ku jirto waxyaabo lagu kalsoon yahay oo aad ugafiican xayeysiisyada sumadda leh
Tags: xayeysiisxayaysiinta waxyaabaha ku jiraFacebookawood lehinpwrdLinkedInxayaysiinta warbaahinta bulshadawaxyaabaha ku jira qayb saddexaadwaxyaabaha lagu kalsoon yahayTwitter
Sannadka Ganacsiga Yaryar ee Bulshada
Isbeddellada Sare ee Qaabeyn doona Suuqgeynta Dijital ah